भुसको आगो सरह फैलिएको विज्ञको आशं`का, नेपालमा कोरोना संक्र`मण तेस्रो चरणमा पुग्ने जो`खिम – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/भुसको आगो सरह फैलिएको विज्ञको आशं`का, नेपालमा कोरोना संक्र`मण तेस्रो चरणमा पुग्ने जो`खिम
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्र`मणको जोखिम घटाउन लकडाउन घोषणा गरे पनि संक्र`मितको संख्या बढ्न थालेपछि समुदायमा चिन्ता बढेको छ। शुक्रबारसम्म कोराना संक्र`मित ३० जना पुगेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, शुक्रबार थप १४ जनामा संक्र`मण देखिएको छ।
उदयपुर जिल्लामा १२ र चितवनमा २ गरी १४ जनामा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको हो। उदरपुरमा देखिएका सबै पुरुष छन्। मन्त्रालयका अनुसार, उदयपुरमा २० देखि ४० वर्षका पुरुषमा संक्र`मण देखिएको छ। व्यक्तिगत गोपनियताका कारण मन्त्रा`लयले उमेर मात्र खुलाएको छ। संक्र`मितमध्ये एक जना बीस र अर्का बाइस र पच्चीस वर्षका छन्। त्यस्तै अर्का छब्बिस र अटठाइस वर्षका ३ जना छन्। २९ वर्षका दुई जना र ३४ वर्षका एक जना छन्। ४० वर्षका पनि एक जना रहेका छन्।
त्रियुगा नगरपालिका–३ भुल्के मस्जिदमा लुकेर बसेका १६ मध्ये १२ जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो। विराटनगरस्थित पीसीआर ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा १२ भारतीयलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो। बाँकी चार जना नेपालीको रिर्पोट भने नेगेटिभ देखिएको छ। कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरको प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षणमा १२ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका प्रमुख मोहन सुवेदीले पुष्टि गरे।
उनीहरुको रिपोर्टको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले समेत पुष्टि गरेको उनले बताए। स्थानीय प्रशासनले उदयपुरका तीन मस्जिदमा अनुगमन गर्दा भुल्केमा १६ जना लुकेर बसेको फेला पारेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडीले बताए। मस्जिदमा रहेका १२ जनासँग भारतीय परिचयपत्र भेटिएको थियो। अन्य ४ जना नेपाली रहेका प्रजिअ पहाडीले बताए। लकडाउनको समयमा मस्जिदमा विदेशी आएर बसेको भन्दै स्थानीयले प्रशासनलाई खबर गरेका थिए।सरकारले गत चैत ९ गते भारत–चीनसँग जोडिएका सबै सीमानाका बन्द गरे पनि भारतका अधिकांश नाकाबाट जोखिमपूर्ण आउजाउ भइरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले उदयपुरका संक्र`मितको विस्तृत विवरण आफूलाई थाहा नभएको बताए।
मस्जिदमा रहेका ती व्यक्तिहरू लुकेर बसेको अवस्थामा परीक्षण गरिएको थियो। मंगलबार सुरक्षाकर्मी सहित मस्जिद पुगेको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले नाक एवं घाँटीको स्वाब संक`लन गरेको थियो। त्यस्तै चितवनमा संक्र`मितमध्ये एकजना पुरुष र अर्को महिला भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले अन्नपूर्णलाई बताए। उनीहरूको उमेर २७ र ६३ छ।
जोखिम बढयो : विज्ञ
सरकारले आवतजावत बन्दको घोषणा गरे पनि खुला सीमाका कारण जोखिम बढेको विज्ञको भनाइ छ। नाकाको आवागमन जोखिमपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै विज्ञले पछिल्लो संक्र`मणले तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको सं`केत भएको बताएका छन्।कोरोना भाइरस समुदाय तहमा फैलिएको अवस्थामा तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ। संक्र`मितबाट समुदायमा फैलिएको पुष्टि भए तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हुन्छ।
बरिष्ठ श्वा सप्र श्वास एवं सघन उपचार (आइसीयु) विज्ञ डा. अर्जुन कार्कीले पछिल्लो अवस्थाले कोरोना भाइरसको संक्र`मण तेस्रो चरणमा जाने संके`तका रूपमा लिन सकिने बताए। उनले भने, ‘लकडाउनको घोषणा सँगै सरकारले सतर्कताका प्रयत्नहरू नअपनाएको भए धेरै अघि वि`ष्फोट हुन सक्थ्यो। असावधानी र लापरवाहीका कारण नेपालमा पनि विष्फोट हुन सक्छ। कति ठूलो र कतिखेर विष्फोट हुन्छ भन्ने मात्र हो।’डा. कार्कीले भने, ‘भुसको आगो जस्तो हुने सं`भावना प्रबल छ। अहिले नै आत्ति`हाल्नु पर्दैन। संक्र`मण हुने बित्तिकै कोही मर्ने पनि होइन।’ दिनेश गाैतम र भरत खड्काले अन्न`पूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर छापेका छन् ।
कोरोनाबाट मृत्यु भएका नबिल बैंकका गार्ड कहाँ थिए कार्यरत ?
काली`माटी तरकारी बजारका ४ जना`मा र्‍या`पिड टेस्ट रिपोर्ट पोजेटि`भ !!
चीनमा २४ घण्टाभित्र कसैको मृ`त्यु भएन, नयाँ संक्र`मित भेटिएनन्